China multi-axial Distal Femur Locking Plate orinasa sy mpanamboatra | Shuangyang
Momba an'i Shuangyang
Hafatra avy amin'ny filoha
Rafitra fanaraha-maso kalitao
Takelaka fanaraha-maso Distal Femur maro-axial
Tombo-kady multi-axial an'ny takelaka fanidiana Humerus
Φ8.0 Series Fixator fanamafisana ivelany - Proxim ...
takelaka arina mini maxofofacial trauma
takelaka gorodona orbital anatomika
1.5 visy fandavahana tena
lavaka boribory-2D titanium anatomika
1. Ny famolavolana peratra multi-axial ho an'ny ampahany akaiky dia mety manitsy ny anjely hamaly ny fangatahan'ny klinika;
2. Fitaovana titanium sy teknolojia fanodinana mandroso;
3. Ny famolavolana endrika ambany dia manampy amin'ny fampihenana ny fahasosorana amin'ny tavy malemy;
4. Anodized ambonin'ny;
5. Famolavolana endrika anatomika;
6. Combi-hole dia mety misafidy visy fanidiana sy visy korteks;
Ny implants orthopedic ho an'ny lovia fanidiana femur distal multi-axial dia mety amin'ny vaky femur distal.
Nampiasaina tamin'ny screw5.0 fanidiana visy, visy kortô screw 4.5, visy fanafoanana Φ6.5, ​​nifanaraka tamin'ny setan'ny fitaovana orthopedic 5.0 andiany.
Famaritana takelaka Distal Femur fanidiana multi-axial
Havia 5 havia
Havana 5 ankavanana
Havoana 7 havia
Lavaka 7 havanana
9 Lava havia
9 Lava havanana
11 Lava havia
11 Lavaka havanana
Takelaka fanidiana vehivavy tsy manalavitra
1. Fitaovana titanium sy teknolojia fanodinana mandroso;
2. Ny famolavolana endrika ambany dia manampy amin'ny fampihenana ny fahasosorana amin'ny tavy malemy;
3. Anodized ambonin'ny;
4. Famolavolana endrika anatomika;
5. Combi-hole dia mety misafidy visy fanidiana sy visy korteks;
Ny implants ara-pahasalamana ho an'ny takelaka fanidiana femur distal dia mety amin'ny vaky femur distal.
Nampiasaina tamin'ny screw5.0 fanidiana visy, visy kortô screw ex4.5, visy fanafoanana Φ6.5, ​​nifanaraka tamin'ny setan'ny fitaovana fitsaboana 5.0.
Distal Femur Locking Plate famaritana
Takelaka taolana titanium toy ny implants orthopedic. Omena ho an'ny tobim-pitsaboana, ary natao hitsaboana ny valan'ireo mararin'ny fanatoranana ankapobeny ataon'ny dokotera voaofana na efa za-draharaha ao amin'ny efitrano fandidiana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tontolo iainana.
Ny rafitra fanidiana lovia sy visy dia manana tombony mihoatra noho ny rafitra visy mahazatra. Raha tsy misy an'io fifandraisana akaiky io, ny fanamafisana ny visy dia hanintona ireo fizarana taolana mankamin'ny lovia, ka hiteraka fiovana eo amin'ny toeran'ny ampahana osseous sy ny fifandraisana occlusal. Ny rafitra takelaka / visy mahazatra dia mitaky fampifanarahana marina ny takelaka amin'ny taolana mifototra. Ny rafitra fanidiana lovia / visy dia manome tombony sasany noho ny takelaka hafa amin'ity lafiny ity. Ny tombony lehibe indrindra dia ny hoe tsy ilaina intsony ny mifandray amin'ny taolana ifotony amin'ny faritra rehetra ny takelaka. Rehefa mihamafy ny visy dia "mihidy" amin'ny lovia e, ka mampiorina ireo ampahany raha tsy mila manery ny taolana amin'ny lovia. Mahatonga azy io tsy ho vitan'ny fampidirana visy ny fanovana.
Ny takelaka misy ny taolana mihidy dia amboarin'ny titanium madio, natao hampiasaina amin'ny fanarenana sy ny fametahana anatiny ny Clavicle, ny rantsam-batana ary ny vaky taolana tsy ara-dalàna na ny kileman-taolana. Ny vokatra dia atolotra anaty fonosana tsy misy fanamafisam-peo ary natao hampiasaina tokana.
Ny lavaka mitambatra misy lavaka misy kofehy sy lavaka famatrarana eo amin'ny lovia fanidiana dia azo ampiasaina amin'ny fanidiana sy famatrarana, izay mety amin'ny safidin'ny dokotera. Ny fifandraisana voafetra eo amin'ny takelaka misy ny taolana sy ny taolana dia mampihena ny fahasimban'ny famatsian-dra periosteal. .
Ny rafitra fanidiana lovia / visy dia naseho mba hanomezana fametrahana azo antoka kokoa noho ny rafitra takelaka / visy tsy mahazatra.
Ny fampiasana rafi-takelaka / visy mihidy dia ny visy tsy azo esorina amin'ny lovia. Midika izany fa na dia ampidirina ao anaty elanelana tapaka aza ny visy dia tsy hitranga ny famahana ny visy. Toy izany koa, raha voatsindrona amin'ny takelaka ny grefy taolana, ny visy fanidiana dia tsy hamaha mandritra ny vanim-potoana fampidirana sy fanasitranana. Ny tombony azo atao amin'ity fananan'ny lozisary mihidy / visy ity dia ny fihenan'ny tranganà aretin-kozatra vokatry ny famaha ny fitaovana. Fantatra fa ny fitaovana malalaka dia manaparitaka valiny mamaivay ary mampiroborobo ny aretina. Mba hamaha ny fitaovana na ny takelaka fanidiana / visy, dia tokony hitranga ny famahana visy avy amin'ny lovia na ny famaha ny visy rehetra avy amin'ny fidiran'ny taolany.
Teo aloha: Takelaka fanidiana Proximal Femur multi-axial
Manaraka: Rafitra fanakatonana takelaka-pirinty Tibia Plateau-5.0 maromaro
Mihidy takelaka Maxillofacial
Mihidy takelaka mihidy
Takelaka fanidiana orthopedic
Takelaka fanidiana titanium
Volar Locking Plate -Torx karazana (Small & La ...
3.0 3.5 4.5 Screw Cortex
Screw compression cannulated
Takelaka fanidiana miendrika Y Humeral eo aloha
Takelaka fanidiana fananganana Clavicle (Afovoany ...
Takelaka fanidiana Tibia maro-axial distal lateral ...
Adiresy:Trano Shuangyang, Tanànan'i Yangshe, Tanànan'i Zhangjiagang, Faritanin'i Jiangsu, Sina